तिहारमा वत्तिको समस्या छैन : कुलमान घिसिङ | Machhapuchhre News | माछापुच्छ्रे न्युज
तिहारमा वत्तिको समस्या छैन : कुलमान घिसिङ
‘झिलिमिली’को चाड भनेर चिनिने तिहार नजिकिएको छ । अबको केही दिनमै तिहारले छपक्क छोप्दै छ । तिहारमा सबैतिर झिलिमिली बत्ती बाल्ने गरिन्छ । परम्परागत दीयो, दियालो र मैनबत्तीले घरआँगन सजाउने परम्परा भए पनि पछिल्लो समय बढ्दो आधुनिकतासँगै हाम्रो संस्कृतिमा समेत बदलाव आएको छ ।
अहिले तिहारमा परम्परागत दीयो, दियालोभन्दा पनि आधुनिक बत्तीहरुको प्रयोग र माग उच्च हुन थालेको छ । यसले विद्युत खपतको माग समेत उच्च गराएको छ । तिहारलाई विद्युत खपत र लोडका हिसाबले विद्युत व्यवस्थापनको मुख्य चुनौतीको समय मानिन्छ ।
तुलनात्मक रुपमा सामान्य दिनको तुलनामा तिहारको समय विद्युत खपतको दर झण्डै ८० प्रतिशतले बढ्ने गर्छ । विशेषगरी लक्ष्मी पूजाको दिन विद्युत खपत उच्च रहन्छ । लक्ष्मी पूजाको दिन देशैभर करिब १३ सय मेगावाटसम्म विद्युत खपत हुन सक्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अनुमान छ ।
अहिले प्राधिकरणसँग उपलब्ध ९ सयदेखि १ हजार मेगावाटले नधान्ने अवस्था आए २ सयदेखि ३ सय मेगावाट विद्युत भारतबाट आपूर्ति गर्ने तयारी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक(सिईओ)कुलमान घिसिङले बताए ।
‘तिहारमा बत्ती धेरै खपत हुन्छ । लोड धेरै पर्छ र विद्युत वितरणमा समस्या आउँछ भनेर नेपालीले चिन्ता नलिए हुन्छ । विद्युत प्राधिकरण जिम्मेवार छ । हामीले त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौं,’ सिईओ घिसिङले भने, ‘तिहारमा अधिकतम १२ सय देखि १३ सय मेगावाटसम्म विद्युत खपत हुनसक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । सरदर हजार मेगावाटसम्म खपत हुने हो, त्यो हाम्रै उत्पादनले धान्न सक्छ । यदि त्योभन्दा माथि गए बाहिरबाट विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गरेका छौं ।’
घिसिङका अनुसार नपुग २ सयदेखि ३ सय मेगावाट विद्युत भारतबाट आपूर्ति गर्ने तयारी गरिएको छ । तिहारका बेला देशमा कलकारखाना तथा उद्योगधन्दाहरु बन्द हुने हुँदा विद्युत खपतसमेत कम हुने उनको भनाइ छ । त्यसैले तिहारमा नेपालीहरुले जति बाले पनि विद्युत वितरणमा समस्या नआउने घिसिङको भनाइ छ ।
तिहारको समयमा विद्युत खपत, लोड र विद्युत वितरणमा आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारी स्ट्यान्डबाई राखिने घिसिङले बताएका छन् । जहाँ समस्या आयो त्यहाँ तत्काल आपूर्ति सहजिकरण गर्न कर्मचारी खटाइने गरी व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
तिहारका बेला सहज विद्युत वितरणका लागि व्यवस्थापनमा आफू स्वयम् खट्ने उनको योजना छ ।
त्यसो त घिसिङ तिहारकै बेला काठमाडौँलाई लोडसेडिङ्गमुक्त बनाएर चर्चामा आएका थिए । उनले २०७४ सालको तिहारमा काठमाडौँ उपत्यकालाई लोडसेडिङ्गमुक्त घोषणा गरेका थिए । पछि घिसिङले देशका अन्य मुख्य सहरलाई समेत लोडसेडिङ्गमुक्त बनाउँदै देशलाई नै लोडसेडिङ्गमुक्त बनाउने महाअभियानमा लागेका थिए । अहिले पुरै देश लोडसेडिङ्ग मुक्त बनेको छ ।
हिमानी लेख्छिन् – आर्यघाटमा गई नियालेर हेर ?? रुदैनन् कहिले जल्नेहरु !! रुन्छन् त केवल जलाउनेहरु !!